Fodimandry :: Nampihetsi-po ny fanaovam-beloma farany an’i Jaona Elite • AoRaha
An-dranomaso sy alahelo no nanate­ran’ny fianakaviany sy ireo naman-dRandriarimalala Harijaona, na i Jaona Elite, ny nofo mangatsiakan’ ity mpandraharaha sady mpanao politika, izay nodimandry tamin’ny alahady alina lasa teo ity. Tao anatin’ ny firaisankina sy fifankatiavana no nanehoan’ireo rehetra nanatrika ny fanaovam-beloma farany an’ity raim-pianakaviana, 42 taona ity, nanomboka tamin’ny fialan’ ny tranovorona tetsy amin’ny lapan’ny Antenimierampirenena Tsimbazaza, nandalo tetsy amin’ny Fjkm Andravoahangy Fivavahana, hatreny amin’ny fasan-drazany teny Ankatso.
Vory olona hatrany ny toe­rana nandalovan’ny razana. Vantany vao fantatra fa ho avy tetsy amin’ny Antenimiera Tsimbazaza ny nofo manga­tsiakan’i Jaona Elite, afak’omaly, dia efa tomefy olona teny an-toerana. Maro ireo nijanona niandry faty sy nanala alahelo ny fianakaviana, an­koatra an’ireo mbola nanohy ny famangiana ny mana-manjo.
Anisan’ireo tonga teny Tsimbazaza ireo vondrona solombavambahoaka efa niara-miasa tamin-dRandriarimalala Harijaona sy ireo izay vao lany tamin’ny fifidianana natao farany teo. Tao ihany koa ireo namany mpankafy fanatanjahantena sy ireo mpandraharaha mpiara-miasa taminy. Nanotrona ny fiana­kaviana hatramin’ireo olona isan-tsokajiny efa nahita soa taminy noho ny asa sosialy samihafa nataony.
Notolorana ny mari-boninahitra « Chevalier de l’ordre de mérite sportif de Mada­gascar » i Jaona Elite, talohan’ ny nitondrana ny razana teny am-piangonana. Nanohina an’ireo olona mpanatrika ny fankasitrahana ny zava-bitany. Nahaontsa ny fahitana ny alahelon’ireo vady aman-janany teo am-pitsofan-drano ny razana. Heni-kaja amam-boni­nahitra ny velona tamin’ny fanaterana ny nofo manga­tsiakan’i Jaona Elite hatreny amin’ny fasan-drazany teny Ankatso, tamin’ny fahitana ny rodoben’ireo mpanamory môtô sy fiarakodia an-jatony nifanerasera taminy, niampy an’ireo tapaka sy namany hatrizay. Nahatalanjona ny fihetsik’ireo mpandalo maro nifanojo lalana tamin’ny razana. Tao ireo nanala satroka, tao koa ireo tafalatsaka tomany ary tao ireo variana noho ny fahitana ny hamaroan’ireo olona nanotrona an’izany fanaovam-beloma farany an-dRandriarimalala Harijaona izany.
Mbola manamafy hatrany ny fampiononana sy ny fanka­herezana ny fianakavian’ity mpanao politika sady mpandraharaha nalaza ity izahay eto amin’ny gazety Ao Raha.